Denmark မြို့တော် Copenhagen | NU MYAT AROUND THE WORLD
Cruise on Nile, the Longest River on Earth
Pyramids of Giza, Egypt ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်တစ်ပါး အီဂျစ်ဂီဇာပိရမစ်ကြီးများ
World 2nd Largest Religious Temple, Karnak Temple
9/11 Memorial in New York, USA
Oasis of Concrete Jungle : Central Park, New York
Grand Canyon, one of the7wonders of natural world
Cambodia,aCountry of Khmers
Tiannmen Square Beijing China
Borobudur , World Largest Buddhist Temple
Taj Mahal, A Symbol of Love
Having Fun in Tokyo Disney Land
Nara, the sacred City of Japan Bowing Deers
Gyeongbokgung Palace, the Gem of Korea
The Adventures in Kota Kinabalu, Malaysia
Penang, the City of Foods @ Oriental Pearl of Malaysia
Street Arts of George Town, Penang: Malaysia
Nepal where Mt.Everest exists
Intramuros, Spainish Old City in Phillipines
Chiang Mai Doi Inthanon Trip
Khao Yai, Little Italy of Thailand
Unicorn Cafe in Bangkok, Thailand
Fly me to the beach, Phuket
Ha Long Bay, the Dragon Jewel of Emerald Sea
Dalat from Vietnam
Fairy Tale Land of Vietnam, Bana Hills
Unique Animals from Australia
Sydney Harbour & Opera House
Vienna, the City of Art
Bruges,afairy tale town of Belgium ပုံပြင်ထဲက မြို့လေးလား ထင်မှတ်မှားရသည့် ဥရောပမှ ရေပေါ်မြို့လေး Bruges
Sleeping Beauty Fairy Tale Castle, Neuschwanstein
Venice, Floating City
My2days Jail Experience in Switzerland
World Smallest Country, Vatican City
Sunny days in Southernmost Part of Myanmar, Kaw Thaung
Kayah, the land of Kayan (Long neck hill tribe of Myanmar)
Cyan Lake of Mandalay, Myanmar ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင
Dee Doke Cave
Netherlands Tulips and Windmills
ချင်းမိုင် Thailand and Doi Inthanon
Indonesia AABC ( Air Asia Bloggers Community)
ကော့သောင်းခရီးစဉ် Southernmost Part of Myanmar
Malaysia ACEQM 2016 အာဆီယံအနုပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲ အကြောင်း
ဘန်ကောက် ကျောက်မျက်ပွဲနှင့် Shopping
Mandalay ၇မိုင်ကမ်းခြေနှင့် ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်
Going inside Pyramids
Dantala Waterfall, Dalat, Vietnam
Ballons over Bagan, Myanmar
Southernmost Part of Myanmar ကော့သောင်းခရီး
ဗီယက်နမ် သဲဖြူ သဲနီကန္တာရ
Self Drive Alpine Coaster in Dantala Waterfall, Vietnam
ချင်းမိုင်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon
Crazy House ထဲံ ၀င်ကြည့်ကြမယ်
Dr Nu Myat Theingi Oo website
Collection of my Travel Talks on MRTV4
ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး၏ ခရီးသွားဆောင်းပါးများ စုစည်းရာ
Posted on June 6, 2018 June 6, 2018 by Nu Myat
This entry was posted in Europe, Uncategorized. Bookmark the permalink.
← Lotte World Tower, the Highest Glass Floor
Norway ဆောင်းပါးများ →
One thought on “Denmark မြို့တော် Copenhagen”
ဖိုးကျော် ရင်ထဲငြိမ်း ဖိုးကျော် ရင်ထဲငြိမ်း says:
Join 44,787 other followers
Nu Myat’s Official Facebook Page
My Facebook Travel Page
Amazing Interiors of Hagia Sophia... So grand and wonderful #hagiasophia #istanbul #turkey #decorations #ceilingdesign #numyataroundtheworld
Hagia Sophia Christian Orthodox Cathedral >>> Ottoman imperial Mosque >>> Nowamuseum Landmark of #istanbul #Turkey #hagiasophia #cathedral #numyataroundtheworld #ottoman
Right in the middle of Asia & Europe Continents Cruise on #Bosphorus #Strait isamust to do in #Istanbul #Turkey #intercontinental #Continent #NuMyataroundtheWorld #bosphorus @numyat #dolcegabbana #dgsicilybag #dolceandgabbana
From Qatar to Istanbul, we passed over these beautiful snow capped mountains near Baghdad #Trip #Flight #QatarAirways
If reading is window of the world, then traveling is door of the world. #TravelBooks #BIGBADBOOKHAUL #BBWYangon
My two lovely nephews’ story time.... #BIGBADBOOKHAUL #BBWYangon #snapandwin
ဘာကြောင့်နှာခေါင်းသွေးလျှံရသလဲ နှာခေါင်းပေါက် အတွင်း မျက်နှာပြင်မှာ သွေးကြောငယ် ပေါင်းများစွာရှိပြီး ဒီသွေးကြော ငယ်တွေဟာ တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပျက်စီးဖို့ လွယ်ကာ နှာခေါင်းကနေ သွေးတွေထွက် လာတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ နှာခေါင်းကို တစ်ခုခုက အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ တိုက်မိတဲ့အခါ နှာခေါင်း သွေးလျှံတတ်ပါတယ်။ အအေးမိခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ကလည်း နှာခေါင်းမျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေတာကြောင့် နှာခေါင်း သွေးလျှံစေတတ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ခါတလေ ဆောင်းတွင်းမှာတိုက်တဲ့ လေအေးတွေက နှာခေါင်းတွေကို ခြောက်သွေ့စေတာကြောင့် နှာခေါင်း သွေးလျှံတတ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု ပူလွန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှား လွန်းရင်လည်း နှာခေါင်း သွေးလျှံတတ်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိဘဲ နှာခေါင်း သွေးလျှံတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ […]
Shopping ထွက်ရာမှာ သိသင့်သောအချက်များ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးအထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ ဆိုင်တွေက အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းချနေကြ တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးဝယ်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ဝယ်ပြီးမှ ကိုယ်နဲ့မတော်လို့ ၊ အသုံးမလိုလို့ ၊ မကြိုက်တော့လို့၊ ၀တ်စရာနေရာ မရှိလို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ စိတ်ညစ်တတ်ကြတဲ့အတွက် အဲဒီလိုနောင်တရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ အောက်ပါအချက်တွေကို ခေါင်းထဲထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်မထွက်ခင် ကိုယ့်မှာ ဘာတွေရှိနေသလဲ။ ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကြိုပြီး ကြည့်ထား ပေးပါ။ ဒါမှ ကိုယ့်မှာရှိပြီးသားပုံစံတွေနဲ့ အရောင်ဆင်တူပုံစံဆင်တူတွေမ၀ယ်မိမှာပါ။ တစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ စဉ်းစားပါ။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်အ၀တ်အ စားဒီဇိုင်းက အရမ်းကို ဆန်းသစ်နေပြီး ကြိုက်လွန်းလှပေမယ့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး၊ အချိန်အခါ မျိုးမှာ ၀တ်ရမလဲစဉ်းစားရခက်နေပါက ၀တ်ရမှာရှက်နေပါက မ၀ယ်ပါနဲ့။ ၀ယ်ထားပြီး တစ်ခါ၊ […]
ဆွဲကြိုးနှင့်ဘယက်များဝတ်ဆင်ရာမှာ ဆွဲကြိုး၊ ဘယက်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ သတိထားရမှာကတော့ လည်ပင်းတိုသူတွေ၊ လေးထောင့်မျက်နှာကျ ရှိသူတွေ၊ ရင်သားကြီးသူတွေအနေနဲ့ ဆွဲကြိုးတွေသိပ်မ၀တ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာက လည် ပင်တိုသူတွေ အထူးသဖြင့် မေးနှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်ဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့ ဘယက်တွေ ဆွဲတဲ့အခါ ကြည့်ရဆိုးပါ တယ်။ ♦ လည်ပင်းရှည်သူတွေဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ဘယ်ဆွဲကြိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်နေတာတွေ့ရပါ တယ်။ လည်ပင်းနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဘယက်၊ ဆွဲကြိုးတွေအပြင် ဆွဲကြိုးခပ်ရှည်ရှည်နဲ့ပါ လိုက်ပါတယ်။ ♦ ဒါပေမဲ့ လည်ပင်းရှည်သူတွေအနေနဲ့ လည်ပင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့ ဆွဲကြိုးသေးသေးမျှင်မျှင်ဆွဲပါက သစ်ကု လားအုပ်နဲ့တူကာ အလှပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဆွဲကြိုးအစား တခြားဆွဲကြိုးပုံစံဆွဲပါက အများကြီး ပိုကြည့် ကောင်းသွားမှာပါ။ ♦ လည်ပင်းရှည်သူတွေဟာ လည်ပင်းအ၀ိုင်းပုံစံအင်္ကျီကို ညှပ်ရိုးအရှည်လောက်ရှိတဲ့ ဆွဲကြိုးခပ်ကြီးကြီးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါက အလွန်လိုက်ဖက်လှပါတယ်။ ♦ လည်ပင်းတိုသူတွေအနေနဲ့ ဆွဲကြိုးတွေနဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုပေမယ့် […]
ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူးမဖြစ်ပေါ်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ရအောင် မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာထကတည်းက အောက်ပါနည်းအတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံသွားမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆေးဝါး အကူအညီမလိုဘဲ ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေမှ ကင်းဝေးနိုင်မှာပါ။ မနက် (၇) နာရီ နှိုးစက်အကူအညီမယူပါနဲ့ တတ်နိုင်ရင် နှိုးစက်မပေးထားဘဲ သသာဝအတိုင်း နိုးထလာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရုံးပိတ်ရက်တွေပါ မကျန် အချိန်မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန်ထ လုပ်ပေးပါက မနက်မနက်ကျရင် အချိန်မှန် အိပ်ယာကနေ အလိုလို နိုးထလာမှာဖြစ်ပါ တယ်။ နှိုးစက်ပိတ်လိုက်ပြီး တစ်နာရီကျော်ကြာတဲ့အထိ ပြန်မှေးအိပ်နေတာမျိုးကလည်း သင်ရဲ့ အိပ်ချိန်စက်ဝန်းကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်စည်းဝါးမကိုက်ညီတော့တဲ့အခါမှာ ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါ တယ်။ မနက် ၈ နာရီ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ မနက်ဘက်မှာ တစ်နေ့တာလုံးလန်းဆန်းတက်ကြွနေအောင် ကော်ဖီဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ဖက်ရည်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခွက် သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ […]
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ကျန်းမာရေး တချို့က အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချစ်လွန်းလို့ မွေးထားတာရှိသလို တချို့ကလည်း အဖော်ရအောင်၊ အိမ်လုံခြုံ အောင် မွေးထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ မွေးထားမွေးထား၊ ကြာတော့ သံယောဇဉ်ရှိလာကာ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို သတ်မှတ်ထားလာတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ဆို မိသားစုဝင်လို၊ သားသမီးအရင်းလို သတ်မှတ် ထားကာ ခွေးတို့၊ ကြောင်တို့လို အသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ ခေါ်တာမျိုးတောင် မကြိုက်ချင်ဘဲ “သားလေး”၊ “သမီးလေး”စသဖြင့် ခေါ် တတ်ကြပါတယ်။ အစားအသောက်ကို သေချာဂရုစိုက်ကျွေးမွေးကာ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တောင် ပြုလုပ်တတ်ကြပါသေး တယ်။ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ သေဆုံးသွားရင်လည်း ၀မ်းနည်းလို့မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်မွေးထားတဲ့အိမ် မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲပူးကပ်လုံးထွေးကာ နေနေ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ့်က လေးတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီးအ ထောက်အကူပြုသလို သေချာဂရုမစိုက်ရင် […]
View numyat’s profile on Instagram